အဆိုးမြင်တဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့် တိတ်တိတ်လေး ကျိတ်ငိုခဲ့ရဖူးတဲ့ မင်းသမီးလေး Dilireba | News Bar Myanmar
အဆိုးမြင်တဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့် တိတ်တိတ်လေး ကျိတ်ငိုခဲ့ရဖူးတဲ့ မင်းသမီးလေး Dilireba
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တကယ့်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ ထိပ်တန်းမိန်းမလှလေး Dilreba Dilmurat ကတော့ သူမဟာ အတိတ်တုန်းက ပရိသတ်တွေရေးသားထားတဲ့ ရင်နာစရာအဆိုးမြင်တဲ့မှတ်ချက်တွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ တိတ်တိတ်လေး ငိုကြွေးခဲ့ရဖူးတဲ့အကြောင်း Sin Chew Daily မှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
အနုပညာလမ်းခရီးကိုလျှောက်လှမ်းရင်း အစောပိုင်းကာလတွေဟာ လွယ်ကူတဲ့နေ့ရက်တွေမဟုတ်ကြတာကို အနုပညာလောကသားတွေကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ကြပါတယ်။ နာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဝေဖန်တဲ့စကားသံတွေလည်း ရှိတာကြောင့် ဒီလိုမျိုးနာကျင်စရာမှတ်ချက်တွေကိုလည်း မင်းသမီး Dilireba အနေနဲ့ ခံစားခဲ့ရပုံပါပဲ။ Dilireba ကဆိုရင် “အရင်တုန်းက Weibo မှာ ကျွန်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုထားတဲ့ တချို့မှတ်ချက်တွေက တော်တော်လေးဆိုးရွားကြပါတယ်။
အဲ့ဒီဝေဖန်စကားသံတွေကိုဖတ်ရင်း ကျွန်မအနေနဲ့ ညတိုင်းလောက် မျက်ရည်ကျရပါတယ်။ ကျွန်မနားမလည်တာက အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အဲ့လိုမျိုးဆိုးရွားတဲ့မှတ်ချက်တွေပေးတာဟာ ပုံမှန်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တစ်ခုမျိုးလား? အနုပညာရှင်တွေတင်မကဘဲ လူတိုင်းလောက်က ဒီလိုမျို​းတွေ အပြောခံရမှကိုဖြစ်မှာလား? နားမလည်နိုင်ပါဘူး။
ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ဆိုးရွားစွာဝေဖန်ခံရခြင်းက လူအများအာရုံစိုက်ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာလို့ အဲ့အတွက်ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ တန်ကြေးတစ်ခုလို့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ နှစ်တွေအများကြီးကြာလာတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ရင့်ကျက်လာပြီး တဖက်သတ်ဆန်တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုလျစ်လျူရှုပြီး နေ့ရက်တိုင်းကို ကောင်းမွန်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်နေပါပြီ” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက “Eternal Love” ဇာတ်လမ်းနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုအကြီးအကျယ်ရရှိထားတဲ့ Dilireba ကတော့ လက်ရှိအချိန်အထိတိုင်အောင် နာမည်ကြီးလူကြိုက်များနေတဲ့မင်းသမီးတစ်ဦးအဖြစ် ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းသစ်ပေါင်းများစွာလည်း လက်ခံရိုက်ကူးတာဖြစ်လို့ Dilireba လေးပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါင်းများစွာကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရပါဦးမယ်။
Next ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတဲ့ ထိုင်း BL ဇာတ်လမ်းတွဲ "I Promised You The Moon" »
Previous « သန်းကြွယ်သူ​ဌေး​တွေဆိုတာကို ​မေ့​မေ့သွားတတ်တဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေရဲ့ ဖြစ်ရပ် ၄ ခု